Sagaal Dhalinyaraha oo Meydadkooda la soo dhigay Duleydka Balcad | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Sagaal Dhalinyaraha oo Meydadkooda la soo dhigay Duleydka Balcad
arar kala duwan ayaa ka soo baxaya cida ka dambeysay dilka dhalinyaro ka kooban 8 qofood oo meydadkooda la soo dhigay degaanka Gololey ee gobolka Sh/dhexe.
Dhalinyaradan ayaa shalay laga qafaashay degaanka iyadoo warkooda iyo wacaalkooda la waayey muddo 24 saac ku dhow.
Afhayeenka Maamulka gobolka Sh/dhexe Daauud Xaaji Cirro ayaa sheegay in dhalinyarada la laayey ay ahaayeen dhaqaatiir ka howlgaleysay degaanka, isagoo Al-shabaab ku eedeeyey iney ka dambeeyeen dilkooda.
“Allaha u Naxariisto inta dhimatay 9 qof oo 8-kamid ah ay ahaayeen dhaqaatiir ka howlgaleysay MCH-yada Deegaanka Gololeey ee Degmada Balcad iyo dawaralkoodii oo shalay ay galinkii dambe ay afduubteen Kooxda Argagixisada ah ee Alshabaab ayaa hada meydkooda lasoo dhigay tuulada gololeey. Hey’addaha amniga ayaa wada baaris la xiriirta sida uu falka ku dhacay” ayuu yiri afhayeenka.
Dil wadareedkan ayaa argagax ka abuuray degmada Balcad iyo degaanada hoos taga, waxaana dhalinyarada meydadkooda la helay ku jiray kuwo caan ka ah degaanka, welina ma jiro hadal ka soo baxay DF iyo Al-shabaab oo ku saabsan cida falkan geysatay.
Previous articleWar deg deg ah 3 Qof oo kale oo lagu dilay Gurigii Meydkiisa lagu Dhaqaayey oday Dhawametdkii Saakay la Dilay magaalada Muqdisho
Next articleNuur Maxamed Maxamuud Sanyare oo leh Dhulka ku yaalo Jiiwaalay in Labadii maamul ee Dayniile iyo Koonfur Galbeed Baadil Ugu Dirireen
Dr. Cali Waare “Aniga laftigeyga ma aanan sugayn abaalmarintaas, filan-waa [verrassing]...
Maamulka degmada Balcad oo sheegay in ay qabteen Qaraxyo Miinooyin...